un bon pc p3v4.5 လောင်း
ဖြေရှင်း un bon pc p3v4.5 လောင်း
3 လအတွင်း2weeks ago -3လအတွင်း2weeks ago #1420 by karty3200
J'aimerai Bien l'achetez un pc mais j'aimerais votre Avis ။
la config ကို:
mode ကိုတာဘို en Intel ကအဓိက i5 2,5 GHz et 4,00 GHz အမြန်နှုန်း
1050gb avec Nvidia က GTX4ti
J'ai ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို plusieurs
est-Que avec cette config ကို je tournerai au Moines à 30 fps en ဓာတ်လှေကား?
un écranဂိမ်းပြင်ပ MSI à la deuxièmeဆိုတဲ့မေးခွန်းကို est-ce Que je peux branchéeမွန် pc ခရီးဆောင်?
သနားခြင်းကရုဏာက de vos တုံ့ပြန်မှုများကို။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3လအတွင်း2လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက karty3200.
0.281 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်